Naas-nuujinta Qabiliste Farmaajo oo Ciyaalka ku heybta ah... | KEYDMEDIA ENGLISH
Naas-nuujinta Qabiliste Farmaajo oo Ciyaalka ku heybta ah…
Kaliya Farmaajo xoogga ma saarin, shaqaaleysiinta dhallinyarada ku heybta ah ee doonaya in ay dalka ka baxaan, hayeeshee, wuxuu sidoo kale, si weyn ugu dhex raftay Ciidanka Qalabka Sida.
MUQDISHO, Soomaaliya – Xilli ay dhamaatay muddadii sharciga ahayd ee Farmaajo, kaliya labo maalinna ka dhiman tahay waqtiga loo asteeyay doorashada Madaxweynaha, ayay soo baxayaan xogo sheegaya in Wasaaradda Arrimaha Dibadda ay qoreyso shaqaalihii ugu badnaa kuwaas oo loo kala dirayo safaaradaha Soomaliya ee dalalka reer galbeedka.
Xogo ay Keydmedia Online, ka heshay ilo diblumaasiyadeed, 10-kii maalin ee la soo dhaafay waxaa si weyn loo laba-jibaaray daabulidda shaqaalihii xaafiika Farmaajo, gaar ahaan kuwa ku heybta ah, kuwaas oo bilihii la soo dhaafay lagu kala qoray safaarado dibadda ah, gaar ahaan safaaradaha dalalka waaweyn ee Yurub, Turkiga iyo Mareykanka.
Farmaajo, wuxuu hore dhallinyaro ku heyb ah, qaab nin tooxsi iyo naas nuujin ah uga shaqaaleysiiyay inta badan safaaradaha Dowladda Federaalka ku leedahay dalalka Afrika, hayeeshee, hadda wuxuu shaqaalihii ku haray xaafiiskiisa u daabulay dibadda, iyadoo u jeeddadu tahay in aysan bannaanka ku soo dhicin marka uu kursiga banneeyo Axadda.
Kaliya Farmaajo xoogga ma saarin, shaqaaleysiinta dhallinyarada ku heybta ah ee doonaya in ay dalka ka baxaan, safaaradaha ka howl-galaan, hayeeshee, wuxuu sidoo kale, si weyn ugu dhex raftay Ciidanka QS, isagoo jagooyin ciidan ku tixay dhallinyaro uu Kullane Jiis ka soo aruuriyay Gedo iyo Caabudwaaq, kuwaas oo lagu dhex milay qeybaha ciidanka.
Sidoo kale, ganacsato ka soo jeedda gobolka Sool, oo garab ka helaya Taliyaha Booliska Xijaar, ayuu Farmaajo u fududeeyay, heshiisyo ganacsi oo la diiday in tartan loo galo, waxaana lagu qoray in ay ku ganacsan karaan dhulal dowladdu leedahay oo ku kala yaalla degmooyinka Shibis, Warta-nabadda iyo Cabdicasiis.
Farmaajo wuxuu waligiis ku faani jiray inuu ka caaggan yahay qabyaaladda, isla-markaana uu yahay waddani dadka Soomaaliyeed u siman yihiin, yeelkeedi, taasi waxa ay soo af-jarantay shanti sano ee la soo dhaafay, waxaana si weyn loogu bartay doorashadii kuraasta Golaha Shacabka ee yaallay Gedo, kala qeybintii ciidan iyo kala fadilidda shaqaalaha.
Kaliya labo maalin ayaa ka dhiman nolosha Farmaajo ee Villa Somalia, waxayna xoguhu sheegayaan in wixii ka danbeeya 15-ka May, uu degi doono hoyga uu hadda deggan yahay Madaxweynaha Galmudug, Qoorqoor, kaasoo ku yaalla agagaarka Hotel Jasiira, waddada aadda dhanka goroonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.